Pharmacy - Easy Multi Display - Ny lozisialy nomerika nomerika tsara indrindra!
Asongadino ny farmasinao
AZO ATAO NY FANAJORANA ANAO
NA HAFA marary
Ampitomboy ny fifampatokisana ary hanatsara ny faharetanao miandry ...
Na manana fampiharana ara-pitsaboana afovoan-tanàna ianao na manome vahaolana fikarakarana ara-pahasalamana fisorohana, ny Easy Multi Display dia manampy anao hampitombo ny marary ny fahatokisanao ny serivisinao ary omena azy ireo ny efitrano fiandrasana miandry azy ireo.
Mifandraisa aminay anio hiresaka momba ny filanao ary manomboka mahazo ny tombontsoa amin'ny fampisehoana ny orinasanao amin'ny rindrambaiko fampisehoana multimedia manara-penitra sy mora indrindra indrindra amin'ny tsena.
Ampidino ny Brochure an'ny farmasia (fr)Mahazoa fidirana eo noho eo
Sintomy ny bokikely fivarotam-panafody (en)Mahazoa fidirana eo noho eo
MISY ATSORATRA MANGALATRA NY FINOANA
Ny mpitsabo miandry anao amin'ny fotoana dia hanidina rehefa mampiasa Easy Multi Display ianao mba hialanao ny mararyo raha mbola miandry ny fotoana voatondro ho azy ireo izy.
MANAVOTRA FINOANA ao amin'ny serivisinao
Amin'ny fampianaranao ny marary anao amin'ny orinasanao sy ny haavon'ny fahaizanao, ny mpitsabo anao dia lasa tsy mahatoky tena amin'ny orinasanao.
AZO ATAO NY FIDERANA AZY
Manolotra serivisy maromaro ve ianao, na fampiroboroboana tolotra mitambatra serivisy? Ity no fotoana anananao hampisehoana amin'ny marary anao ny tolotra.
Araka ny lazain'ny anarana dia mora ampiasaina. Tsy mahalala na inona na inona momba ny solosaina aho. Miaraka amin'ny EMD dia manana vahaolana ara-pifandraisana nomerika misy calibrated ho an'ny birao nify.
Ny vahaolana mavitrika amin'ny famantarana ara-batana amin'ny fanaovan-tsika ara-batana dia mampahafantatra sy manome toky ny marary antsika. Izany dia mamela ny fametrahana tarehy eo ambadiky ny anaran'ny mpiasa ao aminay. Mampiseho toro-hevitra azo ampiharina ho an'ny marary anay koa izahay. Izy io dia ilaina ary mahatonga ny fiandrasana ho fohy kokoa.
Fampiharana ara-tsaina, Wavre